भारतीय टिभीमा कांग्रेस नेता डा.रिजालले के भनेका थिए ? अहिले भाइरल बनेकाे हेर्नुस भिडियो - KhabarKhurak
> भारतीय टिभीमा कांग्रेस नेता डा.रिजालले के भनेका थिए ? अहिले भाइरल बनेकाे हेर्नुस भिडियो
९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १८:१९
काठमाडौं, ९ जेठ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालले भारतीय एक टेलिभिजन बहसमा चीनको उक्साहटमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्ने भारतीय पक्षको आरोपलाई ठाडो खण्डन गरिदिएका छन् ।
नेपाल भारत सीमा विवाद र नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्शाका बारेमा केन्द्रित बहसमा डा. रिजाल र भारतको रिपक्लीक टिभीका सेलिब्रेटी पत्रकार अर्णब गोस्वामीसँगको उक्त बहस सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले भाइरल पनि गराइदिएका छन् ।
डा. रिजालले प्रश्नकर्ताले सोधेका प्रश्नको जवाफ ‘हक्की, राष्ट्रभक्ती र निडर’ तवरले दिएको भन्दै सामाजिक संजालमा उक्त टेलिभजन बहसको भिडियो क्लिप भाइरल बनिरहेको छ । सामाजिक संजाल प्रयोकर्ताहरुले डा. ‘रिजालको जवाफलाई धेरै नेपालीले आफ्नै मनको जवाफ’ भनेका छन् ।
नेपालको सरकारले गलत कामहरु गरेकोमा विपक्षी पार्टीको पनि समर्थन छ र ? भन्ने प्रश्नमा नेता रिजालले ‘हजारौं विषयमा सरकारसँग हाम्रो विमती छ तर सिमानाको विषयमा हामीसँगै छौं’ भनेका थिए ।
चीनको उक्साहटमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको भारतीय पक्षको आरोपलाई उनले ठाडै खण्डन गर्दै नेपालको आफ्नो विषयमा कसैको उक्साहटमा लाग्नु नपर्ने स्पष्ट पारे ।पत्रकार गोस्वामीले संसारभरी चीन एक्लो भएको र त्यसैको निर्देशनमा नेपाल चलेको व्याख्या गरेपछि धेरै भूमिका नबाधी प्रश्न सोध्न डा.रिजालले सुझाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “भारतबाट आएको भाइरस बलियो परेछ” भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई भारतीय प्रस्तोताले पूर्वाग्रही अभिब्यक्ति भनेपछि डा. रिजाल कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
बहसका क्रममा प्रश्तोताले चिनिया कोरोना भाइरस ठिक र भारतीय कोरोना भाइरस बेठिक भनेर ओलीले भनेको भन्दै विषयान्तर गर्न खोजेकोमा पनि डा रिजालले ठाडै प्रतिवाद गरे ।
भारतीय मिडियाहरुले लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक, कालापानी भारतको भएको भनेर ब्याख्या गरेको र दुई देशका नागरिकहरुको सम्बन्ध विगार्ने काम नगर्न र बार्ताबाट समाधान निकाल्न पनि डा. रिजालले बताए ।
सीमा विवादका विषयमा बोलिरहेका बेला प्रश्नकर्ताले विचमै फरक प्रशंग जोड्न खोजेपछि डा. रिजालले ‘मेरो उत्तर सुन्नु, व्यक्ति व्यक्तिलाई सम्मान गर्न नसक्नेले कसरी देशको सम्वन्ध राम्रो बनाउन सक्छ’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
बहसमा नेपाली पत्रकारहरु प्रकाश रिमाल र सुवास घिमिरेलाई सहभागी गराइएको थियो । उक्त टेलिभिजन बहसलाई सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले भाइरल बनाइरहेका छन् ।